Fahabangan-toerana ao amin'ny Ceni :: Miandry ny fankatoavan’ny HCC ny fametraham-pialan-dRakotonarivo Thierry • AoRaha
Fahabangan-toerana ao amin’ny Ceni Miandry ny fankatoavan’ny HCC ny fametraham-pialan-dRakotonarivo Thierry
Nametra-pialana tsy ho filoha lefi­try ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifi­dianana (Ceni) intsony Rakotonarivo Thierry, afak’ omaly. Tsy niandry ela ny Ceni fa, omaly, ihany no nandefa ny taratasy fangatahana fanononana fahabangan- toerana any amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpano­renana (HCC).
Miandry ny valin-tenin’io rafi-pitsarana ambony io ny Antenimierampirenena, amin’ izao fotoana izao, satria Rakotonarivo Thierry no anarana natolotr’izy ireo ho solontenan’io andrimpanjakana io tao amin’ny birao maharitry ny Ceni, tamin’ny taona 2015. Raha toa ka tohanan’ny HCC ny fanambaràna fahabangan-toerana dia mila miroso amin’ny fanendrena na ny fifidianana izay handray ny toeran’itsy filoha lefitra taloha itsy ao amin’ny Ceni ireo solomba­vambahoaka.
Nohazavain-dRakotoma­nana Hery, filohan’ny Ceni, tetsy Alarobia, omaly fa: “noho ny fandinganana ny andininy faha-88 sy faha-89 amin’ny fitsipika anatiny mifehy ny Ceni no namerenan’ny HCC ny fitoriana mikasika ny fangatahana fanesorana an-dRakotonarivo Thierry. Taorian’izay no nanapa-kevitra hametra- pialana itsy farany. Nankatoavin’ny birao maharitra izany satria samy resy lahatra izahay fa izany no lalana hamerenana ny filaminana eto Madagasikara”, hoy izy.
Ny famoahana vaovao tsy nahazoana fankatoavan’ny birao maharitra sy ny savorovoro sy korontana naterak’izany ary ireo hevitra diso isan-tokony novoizina teto amin’ny firenena no nola­zain’ny filohan’ny Ceni fa antony nampiatoana an’itsy filoha lefitra taloha itsy. Nohama­fisiny kosa fa: “tsy manova velively ny voka-pifidianana ny fisian’ny kara-panondro mitovy laharana ao anatin’ny lisi-pifidianana. Olona roa samy hafa ireo nifidy ireo ary vato iray avy no narotsany”.
Nilaza ho efa namoaka an’ireo trangan-javatra ireo ny Ceni nandritra ny tatitra nataon’ ny Fianakaviamben’ny Fran­kôfônia (OIF) teo anatrehan’ireo mpiara-miombon’ antoka tamin’ny fikarakarana fifidianana, tamin’ny taona 2018 sy 2019. “Tsy nanafina an’ireo lesoka ireo izahay fa ny fomba nilazana azy no tsy ampy fitandremana. Tsy ity Ceni tantananay ity mihitsy no fototr’io karapanondro mitovy laharana io fa fitambarana tsy fetezana efa an-taonany maro izany”, hoy hatrany Rakotomanana Hery.
Hitondra fanazavana mikasika ny lisi-pifidianana etsy amin’ny foibeny etsy Alarobia ny Ceni, amin’ny alakamisy 19 marsa 2020, amin’ny 10 ora maraina. Miantso an’ireo mpiara-miombon’antoka rehetra mba ho tonga hanatrika an’izany eny an-toerana ry zareo.
Fankatoavan-dalàna ao amin’ny parlemanta :: Mihenjan-droa tanteraka ny tady eo amin’ireo depiote sy ireo loholona
Fihanaky ny « coronavirus » :: Miandrandra ny fanidiana ny sisin-tany ny ankamaroan’ireo depiote